Ugu Danbayn Arsenal Oo 27 Dhibcood Ku Fadhiisatay Booska 5aad Ee Cayaaraha Premier League – Heemaal News Network
Kooxda Arsenal ayaa guul muhiim ah kaga soo gaartay Bournemouth garoonkeeda Vitality Stadium, kadib markii ay kaga soo adkaatay 2-1.
Kooxaha AFC Bournemouth iyo Arsenal ayaa kulankan is keenay si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan kulamada 13-aad horyaalka Premier League ee xili ciyaareedkan.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa waxay labada kooxood Bournemouth iyo Arsenal ku kala nasteen barbaro 1-1.
Kooxda martida ahayd ee Arsenal ayaa goolka ku hormartay daqiiqadii 30-aad, kadib markii uu laacibka Bournemouth ee Jefferson Lerma goolkan iska dhaliyay ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 1-0.
Laakiin Bournemouth ayaa isla qeybta hore ciyaarta awooday inay hesho goolka barbaraha daqiiqadii 45-aad, kadib markii uu laacibka Joshua King dhex dhigay shabaqa kooxda Arsenal kubad uu caawinteeda lahaa David Brooks.
Qeybta labaad marka dib leysugu soo laabtay ayay markale kooxda Arsenal dib hogaanka ugu qabatay ciyaarta kadib markii uu Pierre-Emerick Aubameyang daqiiqadii 66-aad u dhaliyay goolka 2-aad waxaana caawinta goolkan lahaa Sead Kolasinac.
Ugu dambeyn ciyaarta ayaa kusoo idlaatay 2-1 ay ku adkaatay kooxda Arsenal oo sare u soo qaaday dhibcaheeda dhanka kala sareynta horyaalka Premier League, waxayna haatan booska 5-aad ku fadhidaa 27 dhibcood.
Ismaaciil Cumar Geele Oo Dhagax Dhigay Xaafad Cusub Oo Banki Islaami Ahi Ka Dhisayo Jabuuti
Madaxwayne Saylici Oo Gaadhay Dalka Jabuuti Iyo Ujeedada Safarkiisa Oo Laga Waramay.
Layliye Jose Mourinho Oo Weerar Ku Qaaday Cayaartoyda Kooxdiisa, “La Iskuma Halayn Karo Khadka Dhexe”
Tababare Jose Mourinho ayaa weerar cusub ku qaaday qaar ka mid ah ciyaartooyada kooxdiisa kaddib barbar dhacii goolal la’aanta ahaa ee ay xalay garoonka Old Trafford kula galeen naadiga reer Spain ee Valencia. Jose Mourinho […]
Tartan Lagu Xusayay Halyeygii Kubadda Cagta Soomaaliya Oo Lagu Soo Gabogabeeyey Dalka Canada
Magaladda Toronto, ayaa waxaa lagu soo gaba gabeeyay Tartan Sport-oo lagu xusayay halyeygii kubada cagta Soomaaliya Faarax Weheliye Cadoow Sendiko ku Magac dheer iyo Maamus ku lahaa kubada cagta qarada afrika iyo aduunkaba, waxaana xaflada […]